ल्वांगको तेल डन्डीफोर, तनाव र टाउको दुख्ने समस्याबाट छुटकारा दिलाउनका लागि अत्यन्त फाइदाजनक, यस्ता छन् अन्य फाइदा – Etajakhabar
ल्वांगको तेल डन्डीफोर, तनाव र टाउको दुख्ने समस्याबाट छुटकारा दिलाउनका लागि अत्यन्त फाइदाजनक, यस्ता छन् अन्य फाइदा
ताजा खबर:- थुप्रै औषधीय गुणले भरिपूर्ण ल्वांगमा थुप्रै एन्टी माइक्रोबियल, एन्टी-सेप्टिक र एन्टी-भाइरल गुण पाईन्छ । ल्वांगको तेल पनि ल्वांग जस्तै निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसको साथै यो शरीरमा रक्तसंचार बढाउने पनि काम गर्छ । ल्वांगको तेलमा विभिन्न किसिमको खनिज, क्याल्शियम, आइरन, सोडियम, पोटाशियम, भिटामिन ए र भिटामिन सी प्रयाप्त मात्रामा पाईन्छ । यसकारण यो जानकारी राख्न आवश्यक हुन्छ कि ल्वांगको तेल स्वास्थ्यका लागि कुन किसिमले लाभकारी हुन्छ ।
इम्यूनिटि बढाउन:- ल्वांग शरीरको रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउनको लागि उपयोगी हुन्छ । यसैगरि ल्वांगको तेल पनि इम्यूनिटी बढाएर थुप्रै रोगहरूसँग लड्न मद्दत गर्छ । यसमा एन्टी-अक्सीडेन्ट्स भरिपूर्ण मात्रामा पाईन्छ र यो मुटुको स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यो शरीरमा क्यान्सर सेल्स बढ्न नदिन मद्दत गर्छ ।
पाचन सुधार्छ:- ल्वांगको तेलको प्रयोग निकै पूरानो समयदेखि पाचन सम्बन्धि समस्याहरूलाई दुरुस्त राख्नका लागि गरिन्छ । अपच, डायरिया, उल्टी र आन्द्रा सम्बन्धि समस्याहरूमा ल्वांगको तेल निकै फाइदाजनक हुन्छ । यो पाचक एन्डाइम्सको स्राव बढाएर पाचन दुरुस्त राख्छ । साथै बाडुल्की र मोर्निंग सिकनेसको लागि पनि निकै असरदार औषधि हो ।
डन्डीफोरको उपचार:- ल्वांगको तेलमा एन्टी-माइक्रोबियल गुण हुन्छ । यो डन्डीफोर रोक्नका लागि मद्दतगार हुन्छ । डन्डीफोर अनुहारमा फैलिन नदिन, डन्डीफोरको कारण हुने दुखाई कम गर्न तथा त्वचाको सतहमा रक्तसंचार दुरुस्त गर्न ल्वांगको तेल निकै उपयोगी हुन्छ ।
डायबिटीजको लागि:- ल्वांगको तेल शरीरमा ब्लड सुगर लेभल नियन्त्रित राख्छ, जसबाट डायबिटीजलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्छ । यो डायबिटीजको परम्परागत औषधि मध्य एक हो ।
तनाव र टाउको दुख्ने समस्यामा:- ल्वांगको तेलमा थोरै नून मिलाएर निधारमा लगाउँदा टाउकोलाई आराम मिल्छ । यसको प्रयोगले टाउको दुख्ने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ । यो शरीरमा रक्तसंचार बढाउन मद्दत गर्छ, जसबाट रक्तवाहिनीमा तनाव कम हुन्छ । साथै अधिक टाउको दुख्ने समस्याबाट छुटकारा दिलाउन ल्वांगको तेल मद्दतगार हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०३, २०७४ समय: ०:०७:५१
तपाई कसरी हाँस्नुहुन्छ ? हाँस्ने तरिकाबाटै थाहा हुन्छ मान्छेको स्वभाव
अण्डा खानु स्वास्थ्यको लागी कतिको फाईदाजनक छ,अण्डा कसरी खाने, कति खाने ?
धूमपानसम्बन्धी २० अनौठा तथ्यहरु यस्ता छन्
हेर्नुहोस एलोभेरा जुसको सेवनले फाइदै फाइदा
क्यान्सर रोगले उमेर, धनी र गरीब भन्दैन ,क्यान्सर सेन्टर स्थापना गर्न जुटे प्रदेश २ का युवा चिकित्सक
ग्यास्ट्राइटिसले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी पाउन सकिन्छ सजिलै छुटकरा
महिनावारी अनियमित भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ?अब यसो गर्नुहोस्
आजबाट मुलुकी (संहिता) ऐन लागू हुँदै, यस्तो छ डाक्टर, औषधि र ल्याब सम्बन्धि व्यवस्था